Djibouti oo balaarinaysa Dekada Dooraale - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Djibouti oo balaarinaysa Dekada Dooraale
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 7 Janaayo, 2013, 23:33 GMT 02:33 SGA
Shirkad Shiinaha laga leeyahay ee China Merchant Holding ayaa heshiis la gashay Djibouti si ay u balaariso dekadda Dooraale oo ka mid ah dekadaha ugu wayn Afrika uguna casrisan.
Dekadda Dorale waxay ka mid tahay dekadaha Konteeynarka ee Afrika ugu casriyaysan.
Shirkad Shiinaha laga leeyahay ee China Merchant Holding ayaa heshiis la gashay Djibouti si ay u balaariso dekadda Dooraale oo ah dekadaha ugu wayn Afrika uguna casrisan. Dekada Dorale waxaa maalgaliyay shirkadda DP World waxaana ku soo dega maraakiibta waawayn ee containarada.
Balaarinta dekadda oo ay ku bixi doonto lacag dhan ilaa 300 oo milyan oo Dollar, ayaa suurto galin doonta in la kordhiyo keydadka dekadda ee shidaalka sifaysan iyo in laga dhoofiyo shidaalka cayriin ee ay soo saarto koonfurta Sudan.
Wasiirka Maaliyada iyo ganacsiga ee Djibouti Ilyas Muse Dawaleh, ayaa uga waramay BBC heshiiska ay la galeen Shirkadda Shiinaha.